FITIAVAN-KARENAN’NY OLONA, FAHASOAVAN’ANDRIAMANITRA – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 octobre 17, 2014 Laisser un commentaire sur FITIAVAN-KARENAN’NY OLONA, FAHASOAVAN’ANDRIAMANITRA
« Fa fantrareo ny fahasoavan’i Jesosy Kristy Tompontsika, fa na dia nanan-karena aza Izy, dia tonga malahelo noho ny aminareo, mba hampanan-karena anareo amin’ny alahelony »(2Korintiana 8:9)
Lazain’i Lillian Hellman ao amin’ny lalao nataony mitondra ny lohateny hoe: « The little Foxes » (ireo Fosa kely) ny momba ny fitiavan-karena mahazo ny fianakaviana amin’izao andalam-pidirana amin’ny taonjato vaovao izao. Niainga avy ao amin’ny Testamenta Taloha no nakana izany lalao izany: « Sambory ny amboahaolo, dia ireo amboahaolo madinika izay manimba ny tanimboaloboka; » (Tonon-kiran’i Solomona 2:15), ary izany dia nanondro ny hevi-petsin’ny fitiavan-karena.
Ambaran’ny Baiboly amin’ny fomba maro ny maha-ratsy ara-moraly ny fitiavan-karena. Ambaran’Andriamanitra ao amin’ny Didy voalohany hoe: « aza manana Andriamani-kafa, fa Izaho ihany » (Deotoronomia 5:7). Amporisiany antsika ny hatahotra, ny ho tia, ary ny hatoky Azy mihoatra ny zavatra rehetra. Fandikàna ny didin’Andriamanitra ny fitiavan-karena, ny manao ny harena isan-karazany ho sampy. Ambonin’izany, tsy azo ampiharina ny fitiavan-karena. Raha mangeja olona, na manimba ny fiainany ka mitondra fahavoazana ho azy dia tsy azo ampiharina amin’ny fiainany. Hoy i Paoly: « ary izay ta-hanan-karena dia latsaka amin’ny fakam-panahy sy ny fandrika ary ny filàna maro tsy misy antony sady mandratra, izay mandetika ny olona ao amin’ny fandringanana sy ny fahaverezana » (Itimoty 6:9).
Ahoana no handresena ny fitiavan-karena? Amin’ny fijerentsika an’i Jesosy Kristy. Izy izay Zanak’Andriamanitra dia nandà ny zavatra rehetra ka nanaiky ho tonga nofo ary teraka tao amin’ny fahantrana lalina. Tonga Izy mba hanaisotra ny helotsika, ao anatin’izany ny fitiavan-karena, ary nitondra ho antsika ny haren-dalin’ny lanitra. Tena nataony ho zava-dehibe ny fahantrany, ka nilazany fa manana kely noho ny ambodia, izay manandavaka Izy; noho ny vorona izay manana akany; tsy misy toerana hametrahany ny lohany (Matio 8:20). Tonga harem-panahy bevava ho antsika ny fahantrany: fandriampahalemana ao amin’Andriamanitra, ary famelan-keloka maimaimpoana ho antsika ka nahatonga antsika ho zanany sy mpandova ny fiainana mandrakizay. Tsy manan-kery intsony ny zavatr’izao tontolo izao: foana ny fitiavan-karena satria efa nahazo ny harem-pahasoavan’i Kristy isika.
Publié parfilazantsaramada octobre 17, 2014 Publié dansUncategorized